विमानस्थलले वायुसेवा कम्पनीसँग ६८ करोड ९२ लाख बक्यौता उठाउन बाँकी « News24 : Premium News Channel
विमानस्थलले वायुसेवा कम्पनीसँग ६८ करोड ९२ लाख बक्यौता उठाउन बाँकी
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३२ वायुसेवा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्छन । जसमध्ये २८ ले सेवा लिएबापतको शुल्क बुझाएका छैनन् । आन्तरिक उडान भर्ने कम्पनीको वक्यौता पनि धेरै छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ बक्यौता नतिर्नेमा नेपाल एयरलाइन्स, एयर एसिया, हिमालय एयरलाइन्स र एयर इन्डिया मुख्य छन् ।
वायुसेवा कम्पनीले विमानस्थल विकास, ल्यान्डिङ र पार्किङ, हवाई परिवहन सञ्चालन उपकरणको प्रयोग, सुरक्षासहितका लागि विमानस्थललाई शुल्क बुझाउनु पर्छ । तर, विभिन्न वायुसेवा कम्पनीले सेवा शुल्क वापत विमानस्थललाई ६८ करोड ९२ लाख ५८ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ तिरेका छैनन् ।
कसले कति पैसा तिर्न बाँकी छ ?
– नेपाल एयरलाइन्स ः २४ करोड ४७ लाख
– एयर एसिया ः १४ करोड १३ लाख ७७ हजार ३ सय ९ रुपैयाँ
– हिमालय एयरलाइन्स ः ५ करोड १६ लाख ९३ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ
– एयर इन्डिया ः ४ करोड ८७ लाख ९५ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ
– मलेसियन एयरलाइन्स ः ३ करोड ८१ लाख ७५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ
– चाइना इस्टर्न एयरलाइन्स ः ३ करोड ११ लाख ९ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ
– सिचुवान एयरलाइन्स ः १ करोड ८७ लाख ९८ हजार १ सय १ रुपैयाँ
विमानस्थल प्रशासनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान भर्ने ७० कम्पनीसँग रकम असुल्न बाँकी छ । विमानस्थलले उठाउनु पर्ने सेवा शुल्कबापतको रकम नउठेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उप–महानिर्देशक वीरेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको निर्देशनपछि त्रिभुवन विमानस्थलले मंसिर दोस्रो साता सार्वजनिक सूचना जारी गरी सबै वायुसेवा कम्पनीलाई मंसिर मसान्तभित्र बक्यौता चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको म्यादभित्र दुई दर्जन कम्पनीले ५६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ तिरेका थिए । बाँकी बक्यौता उठाउन विमानस्थल प्रशासनले अब के गर्छ त ?
आन्तरिक उडान भर्ने कम्पनीतर्फ सौर्य एयरलाइन्स र सिम्रिक एयरलाइन्सको बक्यौता रकम सबैभन्दा धेरै छ । अन्य निजी हवाई सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको पनि करोडभन्दा बढी रकम बक्यौता रहेको र असुलीका लागि ताकेता भइरहेको विमानस्थल प्रशासनले जनाएको छ ।